Kulan lagu xoojinayay xiriika jaaliyada Soomaaliyeed iyo laamaha amaanka Koonfur Sudan oo lagu qabtay magaalada Juba. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kulan lagu xoojinayay xiriika jaaliyada Soomaaliyeed iyo laamaha amaanka Koonfur Sudan oo...
Kulan lagu xoojinayay xiriika jaaliyada Soomaaliyeed iyo laamaha amaanka Koonfur Sudan oo lagu qabtay magaalada Juba.
Kulankan oo ay si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen wasaarada arimaha gudaha ee wadanka Koonfur Sudan iyo safaarada Soomaaliya ee magaalada Juba ee caasimada wadanka Koonfur Sudan ayaa ahaa mid lagu xoojinayay xariirka jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadankan iyo laamaha kala duwan ee amniga.
Ugu horeyn waxaa kulanka furay wasiirka arimaha gudaha Koonfur Sudan Michael Chiangjiek Geay kaasi oo sheegay in dowladiisu dhiirigalineyso maalgashiga oo ay Soomaalidu ugu horeyso asigoona faray hay’adaha amniga in la xaliyo baahiyada iyo cabashooyinka ganacsatada Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan.
Sidoo kale danjiraha dowlada Soomaaliya ee wadanka Koonfur Sudan mudane Xuseen Xaji Axmed ayaa sheegay in muhiimada koowaad ay tahay badbaada nafta iyo hantida soomaaliyeed oo aan lagu xadgudbin meelna looga soo wada jeesto wixii dhibaato u keenayo labada dhinac.
Ugu dambeen kulanka ayaa ku soo idlaaday is afgarad aad wanaagsan laguna xaliyay dhamaan caqabadiihii taagnaa sidoo kalene la isku waafaqay in meel looga soo wada jeesto dadka wax tahriibiya iyo wixii keeni kara amni darado.
Previous articleCiidamadda Amaanka oo gacanta ku dhigay Gaari Walxaha Qarxa laga soo buuxiyey
Next articleDowladda Shiinaha oo 10 Malyan oo doolar oo ay ugu talagashay dadka ay abaaraha saameeyeen ku wareejisay